Maayir kuxigeenka Burco Oo Joojiyay Jidadkii Laga Waday Magaalada Iyo Xatooyo Qaran Oo Uu Ku Kacay Iyadoo Maayirkii Maqanyahay+ Warbixin Xiiso leh | Somaliland Today
← DAAWO: Guddoomiyayaasha Asxaabta Somaliland, Maxay Kala Kulmeen Safarkoodii Nairobi ?
Maali Oo Markii Ugu Horaysay Laga Helay Ebola →
Maayir kuxigeenka Burco Oo Joojiyay Jidadkii Laga Waday Magaalada Iyo Xatooyo Qaran Oo Uu Ku Kacay Iyadoo Maayirkii Maqanyahay+ Warbixin Xiiso leh
“Gudoomiye kuxigeenka degmada Burco Mr:Xoday waxa uu caqabad iyo cadaw ku noqday dhamaanba shaqooyinkii horumarineed ee ay waday dawlada hoose“
(SLT-Burco)- Dawlada hoose ee degmada Burco ayaa mudooyinkii udanbeeyay bilawday dibuhabayn dayactir loogu samaynayo jidadkii halbowlaha ahaa ee horey uga jiray magaalada Burco. Mashruucani dib habaynta loogu samaynayo laamiyada waaweyn ee dhexmara magaalada ayay aad ugu riyaaqeen una soo dhaweeyen dhamaan dadweynaha kudhaqan magaaladani burco. Iyago dadkani u arkayay in dawlada hoose ee degmada burco ay hadeerto dhabada saartay wadadii horumarka degmada.
Balse mudo kooban kadib, dadka reer burco waxa ay isweydiinayeen aaway qalabkii ka shaqeynayay wadooyinka, xageyse ku danbeeyeen jidadkii dibu habaynta lagu waday oo gebi ahaantoodba istaagay, kawaasi waa su,aalaha maanta taagan ee ay isweydiinayaan in badan oo kamida dadweynaha reer burco.
Dadbadan oo kamida indheer garadka degmada Burco iyo dhamaanba xubnaha golaha deegaanka ee degmada Burco waxay ogsoonyihiin in kharashkani uu kayimi Golihii Shacabka Ee Taalaada Shiikh bashiir oo ay dawlada hoose gebi ahaantiiba iibisay Kuna iibisay qiimo dhan $900,000
Lacagtaasi faraha badan ee ay dawlada hoose ku iibisay taaladii taariikhiga ahayd ee sheikh bashiir oo dadweynaha reer burco aanay marna ogalayn in dhulkaasi aasaarta u ah gobolka si fudud loo iibsado. Waxayna ku adkaysatay dawlada hoose inay dhulkaasi xaraashto, iyagoo ku andacoonaya inay lacagtaasi dibu habayn ugu samayndoonaan, wadooyinka waaweyn ee dhexmara magaalada oo dayactir la,aan baahsani ka jirto.
Qaar kamida Golaha Deegaanka Degmada Burco oo Somalilandtoday Si gaara arintani uga xogwareysatay ayaa noo xaqiijiyay in Maamulka dawlada Hoose iyo dhamaanba xildhibaanada Golaha Deegaanka Degmada Burco ay isla qaateen in lacagta lagu Iibshey dhulka sheikh bashiir, dibuhabayn loogu sameeyo 13km oo kamida laamiyada dhexmara magaalada ee dayacan, Waxay sidoo kale xildhibaanadu sheegeen inay sida ugu dhakhsaha badan ula xidhiidheen dawlada dhexe iyo haayada Wadooyinka Somaliland si ay uga caawiyaan dhinaca qalabka wadooyinkaasi lagu hirgalinayo. Iyadoo codsigaasina ay ka aqbaleen dawlada dhexe iyo hay,ada wadooyinku, oo isla markiiba ay burco soo gaadheen shaqaalihii iyo qalabkiilgu dhisi alahaa wadooyinkaasi.
isla waqtigaasi oo ku beegnayd horaantii bishan octper, dawlada hoose ee degmada burco waxay bilowday jidkii ugu horeeyay ee dibu habayn lagu sameeyo, kaasi oo ahaa jidka weyn ee Afgooye. Maayirka degmada burco Mud:Maxamed Muraad iyo qaar kamida xildhibaanada Golaha deegaanka degmada Burco oo Jidkaasi ugu horeeyay ka hadlay ayaa ubalanqaaaday dadweynaha reer burco in dibuhabayn iyo casriyayn lagu samayndoono 13km oo kamida jadadka waaweyn ee dhexmara magaalada burco.
Maamulka Gobolka togdheer oo Maalintaasi joogay jidkii ugu horeeyay ee dibuhabayn lagu sameeyo ayaa ugu baaqay dadweynaha reer burco inay garab istaagaan horumarka Balaadhan ee ay wado dawlada hoose ee Burco, , isagoo badhasaabka Gobolka Togdheer Mudane: Maxamed Muuse Diiriye uu ku amaanay Dawlada Hoose ee burco, Waxqabadka balaadhan ee ay dawlada hoose ku doonayso inay dibuhabayn iyo bilic ugu samayso wadooyinka waaweyn ee halbawlaha u ah magaalada.
Hawshaasi ay bilowday dawlada hoose ayay aad ugu riyaaqeen una soo dhaweeyeen dadweynaha reer burco, iyagoo ku amaanay xildhibaanada golaha deegaanka uu gadhwadeenka ka yahay Macalin Maxamed muraad. iyadoo ay hawshaasi socoto todobaad kadib gudoomiye maxamed muraad waxa uu safar gaaban oo shaqo ugu baxay dalka dibadiisa, waxaana shaqadii socotay la wareegay maayir ku xigeenka degmada Burco Mr:Maxamuud axmed Xoday, oo masuulka noqday dhamaanba hawllihii shaqo ee ay waday dawlada hoose ee burco.
Gudoomiye kuxigeenka degmada Burco Mr:Xoday waxa uu caqabad iyo cadaw ku noqday dhamaanba shaqooyinkii horumarineed ee ka socday dawlada hoose. Sidoo kale Mr:xoday waxa uu si lama filaana u joojiyay dhamaanba jidadkii dibu habaynta lagu waday ee ka socday magaalada. Gudoomiye (xoday) oo ka faa,idaysanaya maqnaanshaha Maayirka oo safar shaqo ugu baxay dalka debadiiisa, waxa uu (xoday) isku dayay inuu kala diro dhamaan qalabkii iyo shaqaalahii ka shaqeynayay wadooyinka waaweyn ee laga hirgalinayay magaalada burco, waxaana uu Mr:Xoday ku guulaystay inay guuraan oo gebi ahaanba magaalada ka baxaan shirkadii qandaraastay wadoooyinka la dhisayay.
Wadooyinka dibu habaynta lagu waday oo ay dawlada hoose uqorshaysay una diyaarisay kharashka ku baxaya 13km oo kamida jidadka waaweyn ee dhexmara magaalada, ayay ka hirgaleen oo kaliyaata 3km iyo badh, iyadoo jidadkaasi intii hadhay loo xisaabinayo maayir kuxigeenka burco oo jeebka ku shubtay lacagtii loogu talo galay wadooyinkaasi farabadan ee aan wali la dhisin.
Sidoo kale maayir kuxigeenka burco oo ka fadaa,idaysanaya maqnaanshaha maayirka waxa uu si dhakhsaha ah usoo gebageeyay una joojiyay wado halbawle ah oo kasocatay xaafada Hodan ee magaalada Burco oo wali qabyo ah, iyadoo ay jiraan meelo kamida wadadaasi oo khatar weyn ku haya dadka iyo babuurtba waqtiyada roobka. Maayir kuxgeenka degmada Burco oo aan cidna kaashayn waxa uu utafo xaytay xatooyo qaran oo uu kaga faa,idaysto dawlada hoose inta uu safarka shaqo ku maqan yahay mayirku,
Maayir kuxigeenku isagoo ka faa,idaysanaya fursadiisan qaaliga u ah isaga waxa uu joojiyay isla markaana is hortaagay mashruucii xanaanaynta xoolaha oo ay hay,adi ugu talo gashay inay ka hirgaliso buska-dooni waal ee kuyaal cidhifka bari ee magaalada. Ugu danbayntii qaar kamida xildhibanada golaha deegaanka oo aanu xidhiidh la samaynay ayaa aad uga goodiyay kana xun falalkaasi foosha xun ee uu samaynayo maayir kuxigeenku. Iyagoo qaar kamida xildhibaanada golaha deegaanka oo diiday in magacooda la shaaciyaana ay ugu baaqeen hanti dhawraha guud ee qaranka iyo dhamaanba gudida la dagaalanka musuqmaasuqu inay sida ugu dhakhsaha badan usoo faragaliyaan hawlaha dawlada hoose.
Sikastaba ha ahaatee waxa isasoo taraaya ifafaalo muran oo mar kale soo kala dhexgala golaha deegaanka Burco, kaasi oo hadii aan laga hortagin horseedi kara muran daba dheeraada oo markale fadhiisiya dawlada hoose ee Burco.